Macalinka Juventus Allegri oo ka hadlay inuu ku biirayo Chelsea - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Macalinka Juventus Allegri oo ka hadlay inuu ku biirayo Chelsea
Macalinka Juventus Allegri oo ka hadlay inuu ku biirayo Chelsea
Macallinka Juventus ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegaya inuu heshiis hoose la gaaray kooxda Chelsea, xilli 48 jirkan reer Talyaani si weyn looga hadal-hayo Premier League-ga.
Allegri oo shaqo wanaagsan ka qabanaya Binaconeri ayaa beeniyay inuu wax heshiis ah la gaaray Blues-ka isagoo dhanka kale saxaafadda ku eedeeyay inay qoraan Been maalinle ah.
“Waxba kama jiraan waana been wararka sheegaya inaan la heshiiyay Chelsea” Allegri ayaa sidaas u sheegay saxaafadda. Mar waliba ma xaqiijin karo mana beenin karo wararka ay qoraan saxaafadda,sababtoo ah waxii ay dantooda ka arkaan ayay shacabka u sheegaan taasna maahan shaqadeyda”.
Xanta Allegri la xiriirineysa Premier League-ga ayaa sii korartay kadib markii ay soo baxday inuu baranayo luqadda English-ka,laakiin waxaa uu sheekadaasi kaga jawaabay” Ilaa xilligii aan macallinka u ahaa Cagliari ayaa baranayay luqaddan caalamiga ah, waana arin aniga ii gaar ah,wax xiriir ah lama lahan inaan England aadayo”.
Saxaafadda England ayaa sidookale qortay in Man United ay dadaalkii ugu dambeeyay ugu jirto sidii ay Allegri kaga kor-qaadi laheyd Chelsea oo ah kooxda dhowr mar wada-hadal la yeelatay hogaamiyihii horey looga buriyay AC Mail.
Previous articleDhegeyso Warka Habeenimo 10-02-2016
Next articleSababta uu M’Baye Niang ku diiday Horyaalka England oo la ogaaday